သင့်ရဲ့ရေချိုးခန်းဒီဇိုင်းမီးဖိုချောင်၏ပရိဘောဂ, ဧည့်ခန်းသို့မဟုတ်စင်္ကြံအဖြစ်အရေးမပါသည်။ သို့သော်ရေချိုးခန်းအတွင်းပရိဘောဂရွေးချယ်ရာတွင်၎င်း၏ features တချို့ကိုမှတ်မိသေးတယ်။ ပြီးနောက်ရှိသမျှတို့, လူတိုင်းကိုနှစျပေါငျးမြားစှာကိုအစေခံမညျဖွစျကွောငျးအရည်အသွေးနှင့်လိုအပ်သောထုတ်ကုန်ရဖို့လိုသည်။
မည်သည့်ရေချိုးခန်းတွင်တွေ့မြင်နိုင်ပါသည် items - ရေချိုးဆက်စပ်ပစ္စည်းများနှင့်, သင်တန်း, မှန်များအတွက် Locker ။ ဘက်စုံသုံး "Moidodyr" လက်သုတ်ပုဝါအဘို့အဗီရို, အလှကုန်, အဝတ်တောင်းနှင့်ပိုပြီးအဘို့စင်ပေါ် - သို့သော်ဤလိုအပ်သောဒြပ်စင်အပြင်ခေတ်မီပရိဘောဂထုတ်လုပ်သူကတခြားစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြေရှင်းချက်ပေးပါတယ်။ စည်းကမ်းအဖြစ်, ဖောက်သည်များတူညီစတိုင်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲတစ်ဦးချင်းစီပရိဘောဂသူတို့ရဲ့အကြိုက်ဆုံးပစ္စည်းများဝယ်ယူရန်သို့မဟုတ်ရေချိုးခန်းအဘို့အစုတခုဝယ်ဖို့အခွင့်အလမ်းပေးနေကြသည်။
ပရိဘောဂအမျိုးအစားများအမျိုးမျိုးကနေရှေးခယျြသငျ့ရဲ့ရေချိုးခန်း၏အရွယ်အစားပေါ်တွင်အခြေခံထားရမည်။ သေးငယ်တဲ့ရေချိုးခန်းဧရိယာနှင့်အတူတစ်ဦးစံ layout ကိုရာပရိဘောဂများနိမ့်ဆုံးသတ်မှတ်ချက်လုပ်ဖို့ရပါလိမ့်မယ်။ သင့်ရဲ့လူနေမှုအခြေအနေများသင်မျိုးစုံရေချိုးခန်းနှင့်အိမ်သာအတူကျယ်ဝန်းရေချိုးခန်းရှိသည်ဖို့ခွင့်ပြုလျှင်, သင့်ထံမှရွေးချယ်ဖို့အများကြီးဖြစ်လိမ့်မည်။
ရေချိုးခန်းမှန်ပရိဘောဂတွေနဲ့ပေါင်းစပ်သို့မဟုတ်ကွဲကွာနိုင်ပါတယ်။ ပထမဦးဆုံးအမှု၌, မှန်စင်ပေါ်, ထိန်သိမ်းသို့မဟုတ်သေးငယ်တဲ့ built-in ဗီရိုနှင့်အတူပေါင်းစပ်ပရိဘောဂတစ်ခုတည်းဖြစ်တယ်။ ပုံမှန်အားဖြင့်, ဒီထုတ်ကုန် rectangular ပုံသဏ္ဍာန်ဖြစ်ပါတယ်။ ပတ်ပတ်လည်, ဘဲဥပုံသို့မဟုတ်ပင်မမှန်ပုံသဏ္ဍာန် - စင်ပေါ်မပါဘဲကြေးမုံဆိုဖြစ်နိုင်သည်။ ပရိဘောဂလုပ်ငန်းတွင်စိတ်ဝင်စားဖို့ထုတ်ကုန်အသစ်တွေရေချိုးခန်းသို့မဟုတ်မော်ဒယ် backlit များအတွက်မှန်တက် Fog ကြသည်မဟုတ်။ ထိုအခါမှန်ဆန့်ကျင်ဘက်မြို့ရိုးပေါ်မှာဆွဲထား, သငျသညျအတိမ်အနက်ကိုနေရာလွတ်အံ့သြဖွယ်အကျိုးသက်ရောက်မှုအောင်မြင်ရန်နိုင်ပါတယ်။
ရေချိုးခန်းအတွင်းဗီ - ထိုသို့ပြုမှအလွန်ခက်ခဲသည်အရာမပါဘဲ, ပရိဘောဂများ၏တဦးတည်းဖြစ်တယ်။ Locker တွေအတော်လေးကွဲပြားခြားနားနိုင်ပါသည်:
ဆိုင်းငံ့ - အရှင်ရေချိုးခန်း၏အသုံးဝင်သောဧရိယာချွေတာ;
ခြေထောက်ပေါ် - များသောအားဖြင့်ခြေထောက်အရှည်ချိန်ညှိနိုင်ပါတယ်, ကအဆင်ပြေရဲ့, သင်သည်သင်၏ရေချိုးခန်းအတွင်းကြမ်းပြင်အပူထားပြီးကြပြီထောက်ပံ့;
ဘီးပေါ် - မြို့ရိုး, ပိုက်များနှင့်အခြားအလွန်ဗေဒမဟုတ်ဆက်သွယ်ရေး၏ချွတ်ယွင်းဖုံးကွယ်နိုင်ပါတယ်;
( "Moidodyr '' ဒါခေါ်) ကို washbasin နှင့်ကြေးမုံနှင့်အတူပါဝင်သည် - သူတို့ကမျိုးစုံ Locker တွေကိုနေရာချရန်ခက်ခဲသည်အဘယ်မှာရှိအသေးစားဝုဏ်ထဲမှာအဆင်ပြေပါ၏
တစ်စုပ်သို့မဟုတ်သီးခြားသေတ္တာကလေးကွဲပြားခြားနားသော configuration များအောက်တွင်ကျောက်ပုံစံ;
သမားရိုးကျသို့မဟုတ်ထောင့် - ထို angular ပရိဘောဂများ၏အကူအညီဖြင့်သင်တို့ကိုသေးငယ်တဲ့ရေချိုးခန်းဧရိယာကိုကယ်တင်နိုင်ပါ။
ပရိဘောဂအထက်တွင်ဖော်ပြထားသောအမျိုးအစားမဆို၏အင်္ဂါရပ်အစိုဓာတ်ကိုရန်၎င်း၏တိုးမြှင့ခုခံသည်။ ဒီရည်ရွယ်ချက်, ထိုကဲ့သို့သောကြွေထည်အဖြစ်ပစ္စည်းများ, အဘို့အ ဖန် , အတုနှင့်သဘာ သောကျောက် , သစ်သားသို့မဟုတ်အမှုန်ဘုတ်အဖွဲ့ရေယဉ်ပစ္စည်းများနှင့်ဖုံးလွှမ်း။
ရေချိုးခန်းမှပရိဘောဂရွေးချယ်ခြင်း၎င်း၏ဒီဇိုင်း, အရည်အသွေးပစ္စည်းများနှင့် fittings အာရုံစိုက်: က chromed ခံရဖို့ကောင်းတဲ့နှင့်ပစ္စုပ္ပန်နှင့်နှစ်လိုဖွယ်ကြည့်ရှုသင့်ပါတယ်။ ပရိဘောဂများ၏အရည်အသွေးနှင့်လွှမ်းခြုံတန်ဖိုးထားပါလိမ့်မယ်: အသုတ်ဆေးမြင်နိုင်အလင်းတန်းများဖြာသည်မှန်လျှင်, နှင့်စုပ်ပေါ် - ခြစ်သို့မဟုတ်ချို, ထိုကဲ့သို့သောပရိဘောဂသင်တစ်ဦးအချိန်ကြာမြင့်စွာနောက်ဆုံးမှမဖြစ်နိုင်ဖြစ်ပါတယ်။ ကရေချိုးခန်းအတွင်းပရိဘောဂမှကြွလာသည့်အခါတစ်ဦးအနည်းငယ်ပိုပိုက်ဆံ skimp နှင့်သုံးဖြုန်းဖို့မဟုတ်ပါဘူးအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါသည်, သို့သော်သင်ကျိန်းသေဝယ်ယူအားရကျေနပ်မှုဖြစ်လိမ့်မည်။
အရေးကြီးပြီးပြည်တွင်းထုတ်လုပ်သူများအကြားရွေးချယ်မှုနှင့်စပ်လျဉ်းဒီမှာရွေးချယ်မှုအမြဲဥစ္စာဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့နိုင်ငံမှာထုတ်လုပ်ပရိဘောဂ, အစဉ်မပြတ်အီတလီ, ဂျာမဏီသို့မဟုတ်ဖင်လန်မှတင်သွင်းထက်စျေးနှုန်းချိုသာရှိပါလိမ့်မည်။ ဒါပေမဲ့ဒီကအားလုံးသေချာပေါက်အရည်အသွေးညံ့ဖျင်းကြောင်းမဆိုလိုပါ။ သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အရသာနှင့်ဘုံအဓိပ္ပာယ်အရသိရသည်ဝယ်ယူမှုလုပ်, သင်ကနောင်တမရလိမ့်မည်!
အဆောက်အဦးအပြင် polyurethane မှို
တစ်အားလပ်ရက်အိမ်ပြန်တွေအတွက်အကြံပြုချက်များ - ဒီဇိုင်းရှုခင်းဒီဇိုင်းနှင့်ဥယျာဉ်ကိုအလှဆင်
တင့်တယ်ဖိနပ် - 84 ဓါတ်ပုံမိန်းကလေးများအဘို့အအလှဆုံးဖိနပ်
ငါး casserole - ငါးကနေစိတ်ဝင်စားဖို့ချက်ပြုတ်နည်းများအရသာနှင့်မူရင်းဟင်းလျာများ
အချိန်မှန် - ကောင်းမကောင်းဖြစ်ပြီး, အချိန်မှန်ဖွံ့ဖြိုး?
မိခင်များအဘို့သားဖွါး set ကို